Noocyada DUGSIYADA GUUD EE XULASHADA iyada oo loo marayo FEUDAL DYNASTIES - The Holy Holy of Vietnam Studies
Intii lagu gudajiray abuurista bini-aadamka taariikhdii hore ee qarniyadii hore, boqortooyooyinka awoodda badan ee Bariga (Mongolia, Shiinaha,…) ama Galbeedka (Roman, Griiga,…) marwalba waxay rabeen inay ka adkaadaan dawladaha faqiirka ah ee ku nool ama ka baxsan gobolka si ay u qancaan fikradooda boqortooyada.
Sidoo kale, taariikhda horumar ee taariikhda casriga iyo taariikhda casriga ah, waddammada reer galbeedka ilbaxnimada leh ee leh cilmiga sayniska (koronto, uumi, maraakiib, hub) waxay heleen qaababkooda si ay ugu duulaan waddamada soo koraya ee Bariga ugana faa'iidaystaan ​​sidii gumeysiyo loogu adeego dimoqraadiyadda iyo raasamaal-maal.
Intii lagu gudajiray isbeddelka, Vietnam [Việt Nam] wuxuu noqday ujeedka duulaanka "inuu ilbaxnimo noqdo".
Sidaa darteed, Ilbaxnimada Vietnamese waxaa saameeyay ilbaxnimo badan oo ka socota Shiinaha, Japan, Hindiya, Yurub, Mareykanka.
Laga soo bilaabo kooxaha qowmiyadeed ee amaahday luqadda Shiinaha iyo dhaqanka si ay u horumariyaan dhaqanka umada inta lagu jiro taariikhda dhexe, taariikhda casriga iyo ta casriga (dabayaaqadii qarnigii 19aad), Vietnam [Việt Nam] u beddelay adeegsiga qoraallada Latinka ee Shiinaha1 Bariga Aasiya: Nam [Nam] (Vietnam), Dong (South Korea), Yamato (Japan),….
Laga soo bilaabo dhexe ee qadiimiga ah ilaa taariikhda casriga ah (ilaa ciidamada Faransiisku xukunkoodii ku soo rogeen Vietnam dabayaaqadii qarnigii 19aad), nidaamka waxbarashada dhaqameed ee Vietnam [Việt Nam] waxaa si qoto dheer u saameeyay aasaaska Confucian kumanaan sano oo taarikh ah.
Sidaa daraadeed, in la tababaro dabaqadda xukunka si looga caawiyo ilaalinta iyo hormarinta noocyada fekerka fekerka, habka tababarka loo isticmaalo Vietnam [Việt Nam] si loo helo hibooyin kama duwana nooca Shiinaha.
Anaga oo isku dayeyna inaan ogaano arintaan, waxaan si kooban u dhex mari karnaa waxyaabaha aasaaska u ah sida soo socota:
Wadanka Fiyatnaamiis waxay si dhakhso ah uga fikirtay qaabab waxbarasho si loo xusho ilaha aadanaha iyo in loo isticmaalo dadka kartida leh si ay u dhaxlaan boqortooyadii ama isbedel awood iyo isbedel siyaasadeed.
Markii aad u dooran lahayd hoggaamiyeyaasha milateriga maxkamadda fekerka, waxaa jiray labo qaab:
The habka koowaad xulasho ku saleysan tabaruca shaqsiyadeed iyo mudnaanta ama xubnaha qoyska boqortooyada. Dadka loo soo xushay qaabkan ma aysan helin tababbarka. Habkan waxaa la adeegsaday kahor qarnigii 16aad.
The habka labaad waa tababar xirfadeed. Xubnaha qoyska boqortooyada ee ahaa hogaamiyayaasha militariga waxaa loo tababari doonaa in si rasmi ah loogu dardar geliyo iskuulada fanka. Giang Vo [Guga Võ] Iskuulku wuxuu ahaa iskuulkii ugu horeeyey ee halyeeyada dagaalka waqtigaas.
Giang Vo [Guga Võ] Iskuul ayaa laga dhex dhisay Tran [Trần] Boqortooyo (1253). Waxay ahayd goob loogu talagalay hoggaamiyeyaasha milatariga iyo xubnaha boqortooyooyinka inay ku tababaraan farshaxanka halyeeyada ee xulista. Laga soo bilaabo dugsigaan fanka dagaalka, buuga Milatariga ayaa la qoray, kaas oo ahaa buugga ku saleysan khibradaha ku saleysan dagaalada dhabta ah.
Sidaa darteed, jeneraallo caan ah oo kor ku xusan ayaa la helay intii lagu jiray Tran [Trần] Dawlad.
Si kastaba ha noqotee, hab-dhismeed kastaa wuxuu lahaa xulasho u gaar ah. Tan iyo bilowgii Le [Lê] Boqortooyo (986), xulashada dagaalyahannada ayaa kaliya lagu saleynayay jirdhis jir ahaaneed (jirrooyinka caafimaadka qaba) ama bandhigyada (fanka legdinta).
The Le [Lê] Boqortooyadii waxay lahayd hab ay iyagu ku doortaan. Ilaa boqornimadii Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (magaca erayada waa Bao Thai [Bảo Thái]), xulashooyinku waxay ka dhigteen kuwii xilligii xukumi jiray Duong, Tong, Thanh [Đường, Tống, Thanh] (Trinh Cuong's [Tihinh Cường] xukun), kaas oo raacay habkii caalamiga ahaa ee wakhtigii ay isticmaashay Shiinaha, oo ah waddan xoog badan oo saamayn ku leh aag ballaadhan, gaar ahaan Bariga Aasiya (Jabaan, Kuuriya, Fiyatnaam).
Intaa kadib, imtixaankii u horeeyey ee farshaxanimada ayaa ka bilaabmay Giang Vo [Guga Võ] Dugsi sanadkii 1721 (sanadkii labaad ee boqornimadii Bao Thai [Bảo Thái]). Waxaa jiray loo yaqaan 'Mandarins' maxaa yeelay [giáo thread] (xashiishyada u xilsaaran waxbarashada magaalada) oo kormeerayey barashada fanka dagaalka ee loo yaqaan 'mandarins' oo leh manhaj gaar ah oo loo yaqaan "Classics militari".
Ilaa boqornimadii Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (1721) in habka cusub ee waxbarista loo isticmaalay qof walba, hab aan ugu magac daray is dhexgalka bulshada waqtigan. Waa hagaag [Võ wọnc] sidaas, xafiiska daraasadda fanka dagaal (caasimada Thang Long [Thăng Long]) waxaa gacanta ku hayey waajib waajib ah oo waajib ah.
Tan iyo markaas, xeerarka iyo qawaaniinta tartamada farshaxanka ayaa loo dejiyay, sida loo xaddiday sida loo xusho xaddiga suugaanta.
Halka tartan suugaaneed loo abaabulay saddex heer oo “iyo huong, iyo hoi, iyo dinh"[iyo hương, iyo hội, iyo đình] (imtixaanka gobolka, imtixaanka magaalo-weynta, imtixaanka maxkamadda hoose), tartan faneed dagaal ayaa lagu qabtay laba heerar oo keliya. Heerka koowaad wuxuu ahaa Markaa cu [Sở cử] (iyo Huong [iyo Hương]); heerka labaad wuxuu ahaa Bac cu [Bác cử] (iyo Hoi [iyo Hii]).
Tartanka ayaa aad u adkeeyay in abwaanku Tran Te Xuong [Trến Tế Xương] waxaa ku adkaatay imtixaannadiisa. Wuxuu yiri:
Sideed sano kama uusan caawin karin ku xadgudubka xeerarka baaritaanka [Tám năm không khỏi phạm trường quy].
Xeerar ayaa si adag loogu dabaqay labada suugaanta iyo tartamada fanka legdinta. Miis qawaaniin ah ayaa badanaa laga arki karaa banaanka dugsiga ee musharixiinta ay ogaanayaan. H. Oger duubay xeerarka 'nuxurka laakiin Han Nom [Hán Nôm] alwaax-qorigu aad ayuu u yaraa oo aan loo sheegi karin (Jaantuska). Marka loo eego tartanka fanka fanka, qaanuunka koowaad ma uusan keenin wax buugaag ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood buugaag ayaa lagu soo guran karaa qollo yaryar oo ku saabsan diirka miraha jackfruit (maalmahan ardayda waxay sidoo kale isticmaalaan koobiyada yaryar ee loo yaqaan 'phao [khiyaamada imtixaanada]).
Sawir - Xigasho: Nguyễn Mạnh Hùng oo ku taal "Kỹ thuật của người An Nam" (Farsamada du peuple Annamite) of H. Oger ee Hanoi (1908 -1909)
◊ Askarta iyo Qoryaha
(Booqday jeer 1,072, booqashooyinka 2 maanta)
Views Views: 2,625
← Askarta iyo Qoryaha
NATIIJADA ARRIMAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 1 →
Comments Off ku saabsan CHỮ NÔM ama Qoraalkii Hore ee Fiyatnaamiis iyo Ku-biiridiisii ​​Hore ee Suugaanta Fiyatnaam - Qeybta 1
Booqashada Maanta: 286
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,207
Guud ahaan Wadarta: 286,102